तलब/भत्ता चाँही खाने तर संविधान भने नबनाउने सभासदहरुलाई खबरदारी गर्न, केही युवाहरुले फेसबुक बाट संविधान समयमै जारी गर्न दवाव अभियान प्रारम्भ गरेकाछन् । “परिवर्तनका लागि हामी नेपाली एक” नामक नाम दिइएको फेसबुक पेजमा “ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ” भन्ने नारा सहित संविधान समय मै बनाउन सम्वन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ !
फेसबुक बाट चालिएको यो कदमलाई समर्थन गर्दै, ३ सय जना भन्दा बढि व्यक्तिले यो पेजलाई ‘लाइक’ गरिसकेकाछन् र यो क्रम जारी रहेको छ।
तपाई पनि यस अभियानलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने, फेसबुक मा यो पेज यहाँ (“परिवर्तनका लागि हामी नेपाली एक”) गएर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ ।
Adhikari_bnath August 1, 2012 at 11:51 AM
नेपाल मा जइले पनी समझौतामा क्रांति तुंगी रहेको ले यो समस्या आयको हो
hunna aba chup lagera basna janta janardan ,,, etyka din samma ka jyala kata chhhan??? sambidhan deu desh lai janta uthlan ,,, fery arko kranty ko bigul fuklan,,,,
Nepali Kanchho August 1, 2012 at 11:58 AM
You have doneagood job dude.. i hope your dreams come true//..